Sorafenib Raw (284461-73-0) HPLC≥98% | AASraw
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Sorafenib (284461-73-0)
SKU: 284461-73-0. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Sorafenib (CAS 284461-73-0), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Sorafenib ntụ ntụ a na - eji agwọ ọrịa vasal cancer (RCC), ụdị cancer nke na - amalite n'ime akụrụ. A na - ejikwa Sorafenib emeso carcinoma hepatocellular (ụdị ọnya imeju) nke a na - apụghị ịgwọ ya na ịrịa kansa cancer nke gbasaa n'akụkụ ndị ọzọ nke ahụ, a gaghịkwa agwọ ya na oodine.
Video nke Sorafenib
Sorafenib isi Characters
Molekụla Formula: C21H16ClF3N4O3
Ọbara arọ: 464.83
Melt Point: 202-204 ° C
agba: Ncha edo edo
Sorafenib (284461-73-0) iji mee ihe na steroid steroid
Sorafenib (284461-73-0), aha ahia bụ Nexavar.
1) Dị ka mbadamba nkume n'ọnụ.
2) A na-atụ aro ka e wepu mbadamba na-enweghị nri (ọ dịkarịa ala 1 awa tupu ma ọ bụ 2 awa mgbe o risịrị nri).
3) Ọnụ ego ndị ị ga-enweta na-adabere n'ọtụtụ ihe. Dọkịta gị ga-ekpebi usoro ị ga-eji mee ihe.
4) Mbadamba ndị nwere soyfenib tosylate (274 mg) yiri 200 mg nke Sorafenib (CAS 284461-73-0).
Ịdọ aka ná ntị na Sorafenib
Gwa onye dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị hụrụ nsogbu akpụkpọ ahụ (dị ka ọkụ ọkụ, ọnyá, ọbara ọbara, ọzịza, mgbu), karịsịa na ọbụ aka gị ma ọ bụ ụkwụ ụkwụ gị mgbe ị na-eji Nexavar.
Usoro ọgwụgwọ e mere maka ya bụ ntụgharị nke ihe dịka afọ 100 nke nyocha a raara nye nghọta maka ọdịiche dị n'etiti sel cancer na sel nkịtị. Ka ọ dị ugbu a, ịgwọ ọrịa cancer bụ isi na-egbu ngwa ngwa n'ịwa mkpụrụ ndụ n'ihi na otu akụkụ nke mkpụrụ ndụ kansa bụ nke na-ekewa ngwa ngwa. N'ụzọ dị mwute, ụfọdụ n'ime sel anyị nkịtị na-ekewa ngwa ngwa, na-eme ka ọtụtụ mmetụta dị iche iche.
Usoro ọgwụgwọ a na-eche banyere ịchọta ihe ndị ọzọ dị na mkpụrụ ndụ cancer. Ndị ọkà mmụta sayensị na-achọ ọdịiche dị iche iche na mkpụrụ ndụ cancer na sel nkịtị. A na-eji ozi a iji mepụta ọgwụgwọ a na-atụ anya iji wakpo mkpụrụ ndụ cancer ahụ na-emebighị mkpụrụ ndụ nkịtị, si otú ahụ na-eduga ná mmetụta dị ole na ole. Ụdị ụdị ọgwụgwọ a na-arụ ọrụ dịtụ iche kama ha niile na-egbochi ikike nke cancer cancer na-eto eto, kewaa, rụzie ma / ma ọ bụ kwurịta okwu na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ.
E nwere ụdị ọgwụgwọ ndị a na-atụ anya ya, akọwapụtara n'ime ụzọ atọ buru ibu. Ụfọdụ usoro ọgwụgwọ a na-elekwasị anya na-elekwasị anya n'ihe ndị dị n'ime na ọrụ nke cell cancer. Usoro ọgwụgwọ a na-atụ anya na-eji obere mkpụrụ ndụ nke nwere ike ịbanye na cell ma mebie ọrụ nke mkpụrụ ndụ, na-eme ka ha nwụọ. E nwere ọtụtụ ụdị ọgwụgwọ a na-elekwasị anya na-elekwasị anya n'ime akụkụ nke sel. Usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ a na-elekwasị anya na-echeta ndị nabatara ndị dị n'èzí cell. A na-akpọkwa ọgwụgwọ ndị na-eleta ndị nabatara dịka ọrịa nje monoclonal. Ndị na-emechi nje Antiangiogenesis lekwasịrị arịa ọbara ndị na-enye oxygen na mkpụrụ ndụ, na-eme ka mkpụrụ ndụ ahụ nwee agụụ.
Sorafenib emeziri iji gbochie ọtụtụ mkpụrụ ndụ tumor. Sorafenib (284461-73-0) na-elekwasị anya ọtụtụ enzymes n'elu mkpụrụ ndụ cancer, nakwa dị ka a na-eleba n'ime cell. A na-eche ọtụtụ n'ime ndị a na-etinye aka na angiogenesis (ịmepụta ọbara).
Nnyocha na-aga n'ihu ịchọpụta nke a ga-esi agwọ ọrịa kachasị mma na ọgwụgwọ a na-atụ anya ya na ịchọpụta nyocha ndị ọzọ maka ụdị ọrịa kansa.
Otu esi zuta Sorafenib si AASraw
1 nyochaa maka Sorafenib (284461-73-0)
Sorafenib ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi
Isotretinoin ntụ ntụ
Dapoxetine HCL ntụ ntụ
Medroxyprogesterone acetate ntụ ntụ